राजनीतिक ‘एम्बुस’मा प्रचण्ड - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
वेरोजगार यूवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गछौं: मुख्यमन्त्री भट्ट
प्रदेश दुईको सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण छ : गृहमन्त्री थापा
पहिलो पटक बंगलादेशबाट छुटेको यात्रुवाहक बस नेपाल पुगे
राजनीतिक ‘एम्बुस’मा प्रचण्ड
काठमाडौं १४ मंसिर । ‘म राजनीतिक भूकम्पको केन्द्रमा छु’ सोमबार धुलीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो अवस्था बारे चित्रण गर्दै थिए । सन्र्दभ विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिए पनि उनले वर्तमानमा आफ्नो अवस्थालाई चित्रण गरेका थिए । सत्तागठबन्धन भित्र र बाहिर उनीमाथि ‘प्रहार’ हुन थालेपछि उनको अप्ठ्यारो सार्वजनिक भएको हो । १९ साउमा प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य तीनवटा संकल्प लिएका थिए ।
मधेसी मोर्चाको माग पुरा गरेर संविधान संशोधन गर्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गर्ने । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, प्रशासनिक सुधार उनका त्यसपछिका एजेण्डा थिए । मोर्चाको वार्तापछि संविधान संशोधन भदौभित्रै गर्ने उनको उद्घोष थियो । तर नेतृत्व समालेको झण्डै चार महिना पुग्दा उनका एजेण्डा असफल मात्रै भएका छ्रैनन, प्रचण्ड त्यही एजेण्डाको संकटमा फसेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस मागलाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्न आलटाल गरेपछि वैकल्पिक रूपमा प्रचण्ड नेतृत्वमा वर्तमान सरकार जन्मिएको हो । केही राजनीतिक र केही प्रशासनिक एजेण्डालाई फत्ते गरेर चुनावमा गुमेको साख फर्काउने उनले उत्कण्डा पुरा नहुने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरनजन आचार्य संविधान संशोधनको एजेण्डाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक खाडलमा धकेलिएको टिप्पणी गर्छन । ‘केपी ओलीले बोकेको लोकप्रिय राष्ट्रियताभन्दा माथि उठ्न उनलाई सत्ता सम्हालेको केही दिनमा नै मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेर अरु जनमुखी काममा होमिनुपर्ने थियो ।’ आचार्य भन्छन् ‘तर ढिलागरि ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै उनी गहिरो राजनीतिक खाडलमा धकेलिदैछन् खाडलभित्र पसिहाले भने चै निस्किन मुस्लिक पर्नेछ ।’
संकल्प एउटा बाटो अर्को
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचत भएर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मेरो ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा हुनेछ । केही दिनभित्रै परिणाम देखिने गरी काम गर्नेछु ।’ तर, चार महिना पुग्न लाग्दा उनका बाचा कसम हावादारी सावित भएका छन् ।
न मधेसवादीलाई उनले सहमतिमा ल्याउन सके, न भूकम्पपीडितलाई राहत दिन, न आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउन । संविधान संशोधनमा मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सकेका छैनन । संविधान संशोधनका मुद्दामा अघि बढ्दा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राम्रो साथ दिएका थिए । अहिले पनि प्रचण्डसँग देउवाको बोली मिलेकै छ । तर कांग्रेसभित्रको ठूलो तप्का संविधान संशोधनको एजेण्डामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सन्तुष्ट छैन । सीमांकनका विषयमा संशोधन प्रस्तावमा असहमति आएपछि प्रचण्ड झन अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
आउने बर्थडेमा खुसी साट्न पाउलान त प्रचण्ड ?
भारत–चीन झन पर
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा हुँदा भारतसँग बिग्रीएको सम्बन्ध सुधार गर्ने राख्ने र चीनसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्ने उनको योजना थियो । तर भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ण सुधार आइसकेको छैन । लोकमानसिंह कार्की प्रचरणसँगै उनी भारतको अरुचीमा परिसकेको छन् । ओली नेतृत्वमा रहँदा उठाएका एजेण्डा छायाँमा पर्दा चीन पनि उनीसँग चिढिएको छ ।
४ महिना पुग्न लाग्दा ‘प्रचण्ड’ सरकारले पूर्णता पनि पाउन सकेको छैन । मधेसी मोर्चाको साथ नेपाली कांग्रेसको टेकोमा अडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन सफल हुन सकेनन ? त्यसका कारण उनीसँगै जोडिएका छन् । पार्टीभित्र आफ्नो गुटमा रहेका र पारिवारीक सदस्यलाई सल्लाहकारका रुपमा अघि सारेपछि पहिलो गाँसमै उनलाई ढुङ्गा लागेको थियो । पार्टीभित्र उनको ठूलो आलोचना भएको थियो अहिले पनि कायम छ ।
एमालेमा गुटगत समिकरण: ओलीको साथ छाड्दै महासचिव पोखरेल !
पार्टीभित्र मुख्य नेताहरुलाई साथमा लिन सकेको छैनन । यतिखेर प्रचण्ड आफ्नो सचिवालय, पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका नेता, पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता, सञ्चार जगत, सामाजिक सञ्जाल र विपक्षीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घेराबन्दीमा परेका हुन् । उनको पक्षमा वकालत गरिदिनको संख्या न्यून छ भने आलोचना गर्नेहरु अधिक देखिएका छ ।
सोमबार उनले आफ् भूकम्पको केन्द्रमा रहेको जुन अभिव्यक्ति दिए घटनाक्रमले त्यही उनी ‘राजनीतिक एम्बुस’मा रहेको र कुनैपनि बेला विस्फोट भएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट उछिटिन सक्ने संकेत दिएको छ ।